‘महापतन’ भित्र मैले पाएको यथातथ्य — Newskoseli
डा. ऋषिराज बरालकाठमाडौं, ५ मंसिर ।
हिजो प्रचण्ड-बाबुरामले क्रान्ति गर्छौं भनेर जनयुद्धको थालनी गरे, त्यत्रो बलिदान गराए, जसका विरुद्ध लडे आखिर उनीहरूकै सामु आत्मसमर्पण गरे र वैचारिक-राजनीतिक रूपमा पतन भए भन्ने नै यो पुस्तकको सार हो । यो माओवादी आन्दोलनमा लागेका इमानदार कार्यकर्ताहरू र आम नेपाली जनताले व्यवहारमै देखेको कुरा हो र विप्लवले कुनै नयाँ कुरा भनेनन् पनि भन्न सकिन्छ । तर यो पुस्तकमा अन्य केही सन्दर्भ र सङ्केतहरू पनि छन्, जसको विश्लेषण आवश्यक छ र मेरो प्रयास यसैलाई खोतलखातल गर्नु रहेको छ ।
सङ्घर्षका सन्दर्भमा आलोकको सन्दर्भ पनि जोडिएको छ । यो जटिल प्रश्न हो । हरेक युवालाई उकास्तै आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने पात्र हुन् प्रचण्ड । प्रचण्डले आलोकमा रहेको क्रान्तिकारी स्पिरिट र जुझारुपनलाई आफ्ना विरोधीका विरुद्ध प्रयोग गरे । उनले बाबुराम र कमरेड गौरव विरुद्ध पनि आलोकको प्रयोग गरे । आलोकका कारण बाबुरामसित सम्बन्ध बिग्रिन थालेपछि उनले आलोकको लगाम खिच्न खोजे र निसाना कमरेड किरणतिर सोझ्याए । आलोक प्रचण्ड स्वयंका लागि चुनौती बन्ने देखेपछि उनलाई अनेक चाल गरेर सिध्याइयो । आलोकको बारेमा थप अध्ययन आवश्यक छ । कमरेड शेरमान त सहिद हुनुभयो, तर त्यसबेला उपत्यकाको पार्टी र मोर्चामा जिम्मेवारी लिएका कमरेड दिनेश शर्मा, महेश्वर दाहाल र ऋषिराज बराल यसका भुक्तभोगी छन् । प्रचण्ड-बाबुराम र रवीन्द्रका दृष्टिमा आलोकसित जोडिनु हाम्रो ठूलो अपराध थियो । यी सबै सन्दर्भ र अनुभव नसमेटी आलोक-प्रकरणको सही अभिलेख तयार हुन सक्तैन । उनी रोल्पाको उवामाथिको श्रीनगर भन्ने ठाउँमा शाही सेनाद्वारा मारिए भन्ने गरिएको छ (उनको हत्या विवाद र रहस्यको विषय बनेको छ ) । यथार्थमा उनका मूल हत्यारा प्रचण्ड हुन् । आलोकका केही कमजोरी थिए, तर उनमा रहेको क्रान्तिप्रतिको स्पिरिट र क्षमतालाई सही दिशा नदिएर उनलाई सिध्याइयो आलोकभन्दा ‘महाआलोकहरू’ त्यतिबेर पनि प्रचण्डको वरिपरि फन्का मारिरहेका थिए र अहिले पनि फन्का मारिरहेका छन् ।
भारतीय स्वार्थमा काम गर्ने भनिएका ऋषिकेश साहका प्रिय पात्र, आरम्भमा काङ्ग्रेस पार्टीका कार्यकर्ता बाबुराम विभिन्न क्रियाप्रतिक्रियापछि वाम आन्दोलनसित गाँसिएका थिए । नेकपा (मशाल) ले मोहनविक्रममाथि कारवाही गरेपछि उनी मोहनविक्रमको मसालसित जोडिए । मोहनविक्रमको पार्टीमा कारबाहीमा परेपछि उनी २०४६ सालको आन्दोलनको हुलमुलमा ह्वात्तै अगाडि आए । युवा र पढेलेखेको भनेर प्रचण्डकै तत्परतामा नेकपा (मशाल) का अनुभवी र जुझारु नेता र कार्यकर्तालाई बेवास्ता गर्दै बाबुरामलाई माथिमाथि पुर्याइयो—लुँडो खेलमा भर्यांग चढेर गोटी टाउकामा पुगेझैँ । त्यतिबेर पनि गाइँगुइँ कुरा हुन्थ्यो । ‘जनमोर्चा ‘ कालमा पनि उनको ‘लैनचौर’ सितको सम्बन्धका कुरा हुन्थे । युद्धकालमा त भारतीय विस्तारवादसितको उनको सम्बन्ध सबैका सामु प्रस्ट भयो । वास्तवमा उनी निर्देशित पात्र नै रहेछन् । उनी जेका लागि आएका थिए, जेका लागि उनलाई माओवादी पार्टी र जनयुद्धको राजनीतिसित जोडिएको थियो, त्यो काम सम्पन्न गरेर, दिइएको जिम्मेवारी पूरा गरेर उनी गए । उनले यो काम एक्लै गरेनन्, प्रचण्डको साथ लिएर र विधिविधान मिलाएर गरे, यही नै उनको विशेषता रह्यो । जनयुद्धको विसर्जन र माओवादी आन्दोलनलाई तहसनहस पार्ने जिम्मेवारी पूरा गरेपछि अहिले उनी मार्क्सवाद विरोधी बनेर कहिले नेपाली कांग्रेस र कहिले विदेशी राजदूतावासको ढोका चाहर्दै हिंडेका छन् ।
२. ‘महापतन’ मा विप्लवले जनयुद्धकाल र पछिको ‘शान्तिप्रक्रिया’ काल,कतै पनि पार्टीका अनुभवी र वरिष्ठ नेता कमरेड किरणलाई महत्व दिएका छैनन्, उल्टै किरणको भूमिकालाई न्यूनीकरण गरेका छन् । त्यति मात्र नभएर ‘महापतन’ मार्फत उनले किरणको दृष्टिकोण दक्षिणपन्थी संसदवादी प्रकृतिको भएकाले उनीबाट क्रान्तिको नेतृत्व पनि हुन सक्तैन र क्रान्ति सम्पन्न पनि हुन सक्तैन भन्ने सन्देश दिएका छन् । सिङ्गो पुस्तकमा उनले किरणप्रति नकारात्मक भाव नै सञ्चार गरेका छन्, किरणप्रति वितृष्णा जगाउन खोजेका छन् । खास गरेर चुनवाङ बैठकको सन्दर्भमा र यता प्रचण्डसित सम्बन्ध विच्छेद गरेपछिको समयमा उनी कमरेड किरणप्रति निकै नै आक्रामक बनेका छन् । यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो ।
किरणहरूभन्दा आफूहरू क्रान्तिकारी भएको जिकिर विप्लवले गरेका छन् र उनले आफ्नो समूह अलग्गै रहेको सङ्केत पनि गरेका छन् । यसबाट उनमा रहेको व्यक्तिवाद र गुटबन्दीवादको जानकारी पाउन सकिन्छ ।
नारायणकाजीसितको एकता पार्टीको क्रान्तिकारी धारमाथिको अर्को प्रहार थियो । प्राविधिक र वैचारिक दुवै दृष्टिले पार्टीलाई कमजोर बनाएको थियो । त्यसै गरी प्रचण्डको एकमनावादका विरुद्ध लड्ने नाममा ‘गोँगबु डिनर; र ‘धोबीघाट प्रकरण ‘अर्को महान् गल्ती थियो । त्यसमा कमरेड किरणलगायत हामी सबै चुकेकै हौँ । विचारले त सकिएकै थियो, सङ्गठनात्मक रूपबाट पनि सिद्धिने काम यहीँबाट आरम्भ भएको थियो । धोबीघाट प्रकरण पनि निर्देशित र प्रायोजित योजनाबद्धताको उपज थियो । विप्लव, सोनाम, हितमान र पम्फाको डफ्फाको योजनाबद्धतामा कमरेड किरणलगायतका कमरेडहरू पनि पर्नु ठूलो गल्ती थियो । ‘धोबीघाट प्रकरण’ विचार र दीर्घकालीन सोचाइ र बुझाइले भन्दा आक्रोस, आवेग र प्रतिशोधी भावनाद्वारा निर्देशित प्रकरण थियो ।
माओवादी पार्टीको इतिहासमा ‘गोँगबु डिनर’ र ‘धोबीघाट सन्दर्भ’ ले विशेष अर्थ राख्दछन् । तर विप्लवजीको पुस्तकमा गोँगबु डिनर र धोबीघाटको सन्दर्भ छैन, पाइँदैन । सबैलाई थाहा छ, विप्लव नै ‘धोबीघाट प्रकरण’ को प्रमुख अभियन्ता थिए, जसमा बाबुरामजस्तो अपराधीलाई टाउकामा बोकिएको थियो । म यसलाई महाभूल भन्छु । यो सिङ्गो माओवादी आन्दोलनलाई तहसनहस पार्ने योजनाबद्धताको उपज थियो । यसमा किरण कमरेडरूको ठूलो गल्ति भयो । ‘धोबीघाट प्रकरण’, बाबुरामसितको लसपस, पार्टीविभाजन यस्ता थुप्रै कुराहरू अझै रहस्यमा छन्, जसको खोतलखातल गर्नु आवश्यक छ । तर विप्लवको ‘महापतन’ यसबारे केही बोल्दैन । किन बोल्दैन, त्यो पनि प्रस्ट छ ।
आफ्नै क्रियाशीलता समेतमा पार्टी विभाजन भएर बनेको नेकपा-माओवादीमा विप्लव विशेष भूमिका चाहन्थे । सातौँ महाधिवेशनमा यो चाहना झन् तीव्र बनेको थियो । उनी भरिसक्के पार्टी कब्जा गर्ने, नसके आफूले चाहेअनुसार पार्टी परिचालन गर्न चाहन्थे । आफूले चाहेअनुसारको रीतिस्थिति नमिलेपछि अनेक बखेडा निकालेर अन्ततः पार्टीसित विप्लव समूहले सम्बन्ध विच्छेद गरेको कुरा सबैलाई थाहा छ । आफ्नो रहस्यमय सम्बन्ध विच्छेदलाई सैद्धान्तिक जामा पहिर्याएर अहिले उनले “ किरणको दृष्टिकोण दक्षिणपन्थी संसदवादी प्रकृतिको देखेपछि हामीले किरणसँग विद्रोह गरेर पार्टी पुनर्गठन गर्यौं” भनेर लेखेका छन् । यसमा इमान्दारीको सर्वथा अभाव छ । यो राजनीतिक बेइमानी हो । अवश्य पनि प्रचण्डसित सम्बन्ध विच्छेद गरेपछि मुलुकभित्रबाट मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि कमरेड किरणबाट नयाँ आशा गरेको थियो । त्यस किसिमको अवसर पनि थियो । वैचारिक-राजनीतिक दृष्टिले सही हुँदाहुँदै पनि, क्रान्तिप्रति विश्वास र दृढता हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा जान नसक्नु, ‘सही मान्छे सही ठाउँ’ को सङ्गठनात्मक तारतम्य मिलाउन नसक्नु र उदारतावाद र कतिपय सन्दर्भमा पुच्छरवादमा फस्नु कमरेड किरणका कमजोरी रहे । तर विप्लवले “ किरणको दृष्टिकोण दषिणपन्थी संसदवादी प्रकृतिको”, “किरणको दृष्टिकोणमा क्षिणपन्थी संसदवादी प्रकृतिको रोग”, “विचारको दृष्टिले क्रान्तिकारी धारमा बसे पनि कार्यनीतिका दृष्टिले संसदवादी” भनेर जसरी किरणको वैचारिक पक्षमा प्रश्न उठाएका छन्, यसमा पूर्वाग्रह र आक्रोसको मात्रा बढी छ ।
३. कथावाचक विप्लव ‘महापतन’ बाहिरका पात्र होइनन् । उनले यो महापतनको आरम्भदेखि अन्तसम्म हेरेका छन्, देखेका छन् । ‘महापतन’ को पोखरीमा उनले पनि डुबुल्की मारेका छन् । उनी आरम्भदेखि नै निरन्तर पार्टीभित्रका ‘अन्तर्सङ्घर्ष र दुई लाइन सङ्घर्ष’ मा साक्षी मात्र नभएर सहभागी पनि छन् । सुदर्शनले ‘बाकुनिनको घोडा’ लेख्दा बाबुरामलाई खुसी पार्न प्रचण्डले सुदर्शनलाई हप्कीदप्की गरेकै हुन् । पार्टीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको सेरोफेरोमा लेखिएको कमरेड गौरवको रचना ‘जनादेश’ मा नछापिएर ‘महिमा’ मा छाप्नु परेको कुराको साक्षी हामी छौँ । चित्त नबुझ्नेहरू सबैले आआफनो ठाउँबाट आआफ्नो किसिमले बोलेकै हुन् । भक्तबहादुर श्रेष्ठले ‘प्रचण्डपथ’ नमान्दा केकस्तो मानसिक तनाव भोगे भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छ । प्रचण्डले रोल्पालाई च्यापेर रुकुममाथि बन्चरो उज्याएकै हुन् । पार्टीभित्रको दुई लाइन सङ्घर्षमा विप्लव कुन ठाउँमा उभिए भन्ने कुराको साक्षी थुप्रै कमरेडहरू छन् । समयले सबैको कथागाथा बाहिर ल्याउला । कसैले पनि अहिले पानीमाथिको ओभानो नबने हुन्छ ।
‘महामपतन’ मा उनले “सशस्त्र क्रान्तिको तयारी गर्दैछौँ”, ”… नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा लड्ने जनमुक्ति सेना बन्दै गएको छ”, भनेका छन् । उनको यस किसिमको क्रान्तिकारी स्पिरिट र आशावादको स्वागत गर्नुपर्छ । परन्तु, लडाइँ आवेग, आक्रोस, कुण्ठा, प्रचारबाजी र गालीगलौजले लडिँदैन, सही विचार, सही कार्यदिशा, सही नीति, योजना र कार्यक्रमले लडाइँ लडिन्छ । जसरी यो संविधान नमान्दैमा सबै प्रगतिशील र क्रान्तिकारी हुँदैनन्, त्यसै गरी सशस्त्र क्रान्तिको कुरा गर्दैमा कोही पनि क्रान्तिकारी हुन सक्तैन । नेकपा-माओवादीसित सम्बन्ध विच्छेद गरेर ‘एकीकृत क्रान्ति’ गर्ने भनेर घोषणा गरेदेखि नै “एकीकृत क्रान्ति कार्यदिशा हो या क्रान्तिको स्वरूप” भन्ने बारेमा प्रश्न उठेको हो । पछि विप्लव समूहको आठौँ महाधिवेशनले ‘उत्तर-साम्राज्यवाद’ अर्थात् साम्राज्यवादको अन्त्य भयो भन्ने धारणा अघि सार्यो । क्रान्ति गर्छु भन्ने स्पिरिटको स्वागत गर्न सकिए पनि जोसित सही कार्यदिशा नै छैन, (यथार्थमा ‘एकीकृत क्रान्ति’ कार्यदिशा नै होइन ।), जसले साम्राज्यवादको अन्त्यको घोषणा गर्छ, उसबाट हुने क्रान्ति, अझ सशस्त्र क्रान्तिको स्वरूपका बारेमा प्रस्न उठ्नु स्वाभाविक छ । ‘महापतन’ मा प्रचण्ड-बाबुरामप्रति आक्रोस छ, पीडा छ, क्रान्तिको चिन्ता पनि छ, तर चिन्तन पक्षको अभाव छ, जे-जति छ, त्यो पनि एकदमै कमजोर छ । यही नै हो ‘महापतन’ । प्रचण्ड-बाबुरामप्रति आक्रोस, किरणप्रति उपेक्षाभाव र आफू दिशाविहीन, यही हो ‘महापतन’ । यसले त उल्टै निराशा र शून्यताबोधतिर प्रवृत्त गराउँछ । यो भनेको विसर्जनवादतर्फको यात्रा हो ।
४. हामीले जनयुद्धका यात्रामा निकै ठूलो इतिहास रच्यौँ, नेपालजस्तो सानो मुलुकबाट विश्वलाई नयाँ र उदाहरणीय सन्देश दिन सकिन्छ भन्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गर्यौं । तर जनयुद्धका प्राप्तिको रक्षा गर्न सकेनौँ । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो भूल, गल्ति यही नै भयो । उपलब्धि र विसर्जन दुवैमा सहभागी भएर हामी साक्षी किनाराका सदर मात्र भयोँ । यस अर्थमा प्रचण्ड-बाबुरामको महाअपराधको हामी पनि अंशियार हौँ । प्रचण्ड-बाबुरामको नियत र प्रवृत्तिलाई समयमै बुझ्न नसक्नु र बुझेर पनि समयमै कदम नचाल्नु हाम्रो ठूलो गल्ती भयो । सत्य यही हो । हैसियत र जिम्मेवारीअनुसार हामी सबै यसको भागिदार छौँ । यस अर्थमा हामी सबै आत्मसमीक्षा र आत्मालोचनाको कठघरामा उभिएका छौं , यो र त्यो, हामीहरू र उनीहरू भन्ने कुरा छैन ।
अमुकअमुक पतन भए, अमुक अवसरवादी र संसदवादी र हामी मात्रै क्रान्तिकारी भनेर घोषणा गर्न गारो छैन, भनिदिनु न हो । माटोको ढिस्कोमा उभिएर म सगरमाथाको चुचुरोमा उभिएको छु भन्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ । हावाहुरी चलेको बेला रुखमा बसेको फिस्टोले ओहो, मेलै कसरी रुख हल्लाएँ भनेर फर्याकफुरुक गर्न सक्छ, यो पनि उसको खुसीको कुरा हो । तर सत्य त यो होइन । कसैले पनि अनुहार लुकाउन नखोजे हुन्छ, ‘महापतन’ भित्र सबैको अनुहार झलझली देखिन्छ, खुलस्त । प्रचण्ड-बाबुरामको ‘महापतन’ बाट शिक्षा लिने हो भने अहम् , अहङ्कार र एक्लेवीर प्रवृत्ति त्यागेर हामी आफैँले पहिले आफू उभिएको धरातल नियाल्नु आवश्यक छ ।